Muuri News Network » Warbixin: Weerarkii hotel Syl & beerta Nabada sidee loo Abaabulay & qasaaraha..
Warbixin: Weerarkii hotel Syl & beerta Nabada sidee loo Abaabulay & qasaaraha..
Kooxda Alshabaab ayaa abaabushay weerar mataane ah oo si weyn loo qorsheeyay, kaasoo loogu talogalay in lagu galaafto nolosha dad badan, wuxuuna bartilmaameedku ahaa Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho & Beerta Nabadda ee dhinaca dambe ee hotelka ku taalla.
Qaraxa waxaa loo adeegsaday waxyaabo qarxa oo culeyskoodu dhan yahay 200 tan, waana kii ugu weynaa ee ka dhaca dalka sida saraakiisha amniga dowladda sheegeen.
Sida ay NISA sheegtay, waxaa weerarkan loo adeegsaday afar baabuur oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo 4 dabley ah oo loo qorsheeyay inay weerar ku galaan Hotelka SYL iyo Beerta Nabadda ee loo nasasho tago.
Gaariga koowaad ee laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaa lagu joojiyay bar koontarool oo ku dhow Hotelka SYL una dhow Beerta Nabadda, halkaaasoo gaarigii isku qarxiyay, waxaana goobta ku dhintay laba askari oo ka mida ciidamada nabadsugidda. Qaraxa kadib waxaa laba dabley oo Alshabaab ah lagu dilay qeybta hote ee Beerta Nabadda, iyagoo doonayay inay gudaha u galaan Beerta, waxaana rasaas i weydaarsaday labada dabley ee Alshabaab iyo NISA rasaastaas oo dad kala duwan qasaare kasoo gaartay, NISA ayaa goobtaasi ku dishay labada dabley.
Gaariga labaad ee is qarxiyay wuxuu ujeedkiisu ahaa inuu galo Hotelka SYL si albaabka hore u burburo kadibna laba dabley ah oo diyaar u ahaa kana tirsan Alshabaab ay gudaha u galaan Hotelka oo halkaasi dadka ku sugan ku laayaan. Dagaal dhex maray ciidamada Nabadgelyada iyo gaariga celiyay, kadibna iska hor imaad dhex maray lagu dilay labada dabley, kadibna waxaa qarxay Gaariga labaad.
Gaarigan waxaa la dhigay halka loo yaqaan Bulaalayaasha, halkaasoo mar dambe uu ka qarxay, waxaana loogu talo galay marka dadka goobaha la weeraray ku jira dibadda u yaacaan in lala beegsado.
Waxaa loogu talogalay in lagu qarxiyo gaadiidka gurmadka u socda iyo ciidamada soo gurmada, laakiin markii uu qarxay dad badani kuma sugneyn goobta.
“Weerarka waxaa lagu soo qaaday afar baabuur oo laga soo buuxiyay, waxyaabaha qarxa iyo Maleeshiyo Alshabaab ka tirsan oo kutala-galkoodu ahaa inay gudaha u galaan Hotelka SYL iyo Beerta Nabadda”.
Dhaawacyada waxay u badnaayeen dad wadooyinka ku sugnaa ama marayay xiligiii qaraxyda dhaceen iyo dadkii ku sugnaa qeybaha hore ee Beerta nabadda.
Dadka ku dhintay weerarka ayaa gaaraya 22 ruux oo ay ku jiraan kuwii weerarka soo qaaday, waxaana dhaawacu ka badan yahay 25 ruux, sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka iyo ciidamada Nabadgelyada. Ciidamada ku dhintay weerarka ayaa gaaraya 4 askari. Waxaa kaloo ka mida laba haween oo ka mida ahaa kuwa nadaafadda, ganacsatada qaadka iyo dad ka ag dhowaa.
Marka la eego sida weerarka loo qorsheeyay iyo sida Alshabaab u soo maleegtay waxaa la oran karaa waxaa laga badbaaday dhiig badan oo daata oo ka darnaan lahaa weeraradii Liido iyo Hotel Saxafi, taasoo ku timid Alle mahadii iyo dadaalka ciidamada nabadsugidda.